कुनैपनि दम्पतीको बच्चा नहुनुमा महिला तथा पुरुष दुइ मध्ये जसको पनि समस्या हुन सक्छ । तर अध्ययनहरूले कतिपय अवस्थामा यौन आसन(सेक्स पोजिसन)ले पनि यसमा ठुलो भूमिका खेल्ने कुरा देखाएको छ । आसनहरूलाइ अनुसरण गरि सेक्स गरेमा महिला गर्भवती हुन सहज हुने कुरा एक अध्ययनले समेत देखाएको छ । मिसिनेरी पोजिसन सेक्सको यो तरिकालाइ फेस टु […]
यौन सम्वन्ध माहिला पुरुष दुबैको लागी अपरिहार्य कुरा हो । जुन जीवनमा फरक–फरक खालको यौन अनुभव गर्न चाहान्छन् । पहिलो पटकको यौन सम्वन्धका बारेमा नवयुवाको मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्ने गर्दछन् र खुलदुली पनि हुने गर्दछन् । खुलदुलीका विच एउटा छुट्टै खुसीको महसुस पनि नवजवानहरुले गर्दै रहन्छन् । भर्खरै किशोरअवस्थामा पुगेका युवाहरुमा यौनका विषयमा धेरै नै […]
संभोगका अनौठा नियम : दाह्री पाल्नेले ‘चुम्बन गर्न नपाउनेदेखि बत्ती निभाउनुपर्नेसम्म’
पार्टनरबीचको सहमतिमा सम्भोग हुनु सामान्य विषय हो ।सम्भोगका विषयमा समाज र देश अनुसार फरक फरक धारण रहँदै आएको छ । कुनै देशमा सम्भोगलाई सामान्य लिइन्छ भने कहि निकै कडा नियम बनेको हुन्छ । यहाँ हामीले सम्भोग सम्बन्धि केही तथ्यहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन तथ्य देश अनुसार, फरक फरक पाइएको छ । हंगेरीमा सम्भोगका लागि […]
हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । जो मानिस नियमित सेक्स गर्छन […]
मानिसहरुका लागी हरेक कुरा सिमित मात्रामा गर्यो भने त्यसले फाइदा पुग्छ । नेपाली समाजमा यौनसम्पर्कलाई अत्ति साँघुरो रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने, यौनसम्पर्क एकप्रकारको शारीरिक व्यायम हो । स्वस्थ्य रुपमा गरिएको यौनसम्पर्कले मुटुजन्य रोगीहरुलाई समेत राम्रो प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्रै होइन नियमित रुपमा मिलाएर गरिएको यौनसम्पर्कले हृदयघातको सम्भावना समेत कम […]
महिलाहरुले हस्तमैथुन गर्नुपर्ने कारणहरु
यस्तो छ, उमेर अनुसार यौन व्यवहारहरु
जान्नुहोस्, यसकारण आउँछ महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि बैंस !
बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन । बुडापाकाका अनुसार जिवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोख्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे ।यस्तैमा आज हामी आज तपाईहरुलाई महिलाहरुको ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका कारणहरुका बारेमा जानकारी गराउन गईरहेका छौं । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक […]
हेर्नुहोस्, दुनियाँलाई आश्चर्यचकित पारिदिने १० विचित्रका सेक्स रेकर्ड
विश्वमा हरेक कुरामा रेकर्ड बन्छ । रेकर्ड राख्नकै लागि कतिपय मानिसहरुले विचित्रका कामहरु गर्ने पनि गर्छन् । यस्तोमा सेक्समा पनि धेरै रेकर्ड बनेका छन् तर, यसमा केही सेक्स रेकर्ड यति अद्भुत, यति विचित्र छन् कि त्यसको बारेमा पढ्दा तपाईलाई एकपटक त विश्वास नै गर्न गाह्रो हुन्छ । अद्भुत अमेरिकाको एक महिलाले एकै दिनमा ९१९ जनासँग […]
एक अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्बन्ध राख्ने महिलाको सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ ।निमयित यौन सम्बन्ध राख्ने महिलाको शारिरिक बनावटमा भिन्नता आउँने पत्ता लागेको छ । सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनअनुसार नियमित यौन सम्बन्ध राख्ने महिलाको शारीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै धेरै पटक यौन सम्पर्क गर्ने महिलाहरुको भने […]
आफ्नो श्रीमती महिनावारी हुँदा श्रीमानले के गर्ने ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
महिनावारीको क्रममा महिलामा विभिन्न शारिरिक र मानसिक परिवर्तन हुने गर्दछ । यो क्रममा महिलाले आफ्नो पुरुष पार्टनरसँग सहयोग र सहानुभूतीको आशा गर्दछन् र आशा अनुरुप नतिजा पाए महिलाहरुको आधा पीडा कम हुने गर्दछ । महिनावारीको क्रममा के गर्ने पुरुष ? बम्बे हस्पिटलकी गायनोकोलोजिस्ट डा. निरजा पौराणिकका अनुसार पुरुषले महिला महिनावारी हुँदा फोहोर वा असामान्य गतिविधीको […]
यौन सम्पर्कको लागि महिलालाई उत्तेजक बनाउने तरिकाहरु
अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् । तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् । जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उनीहरूमा कामेच्छा जागृत हुन्छ । महिलाको विभिन्न भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ […]
वैकल्पिक यौन जोडी छ भने पनि स्थायी यौन जोडीसँग यौन सम्पर्क गर्न रुचाइँदैन । स्थायी जोडीसँग यौन सम्पर्क गर्न मन नलाग्न सक्छ । यौन सम्पर्क गर्दा पनि पीडा हुन्छ । व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहार बडो परिवर्तनशील हुन्छ । स्वभाव र व्यवहार परिवर्तनशील हुने भएकाले एक व्यक्तिसँग मात्रै यौन सम्पर्क गर्न मन नलाग्न सक्छ । जुन […]
यदि तपाईले सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ खतरा !
मानिसहरुले विभिन्न किसिमका सपना देख्ने गर्छन् । यीमध्ये केही सपनाको खास अर्थ हुन्छ । केही सपनाको भने उतिसारो महत्व हुँदैन । यदि सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देखियो भने यसको फरक-फरक अर्थ हुन सक्छ । यस्तो सपनाको अर्थ यो कुरामा निर्भर गर्छ कि तपाईको पार्टनर को हुन्छ ? यदि तपाई सपनामा अपरिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको […]
यौनसम्पर्क गर्नेवित्तिकै किन पुरुषलाई लाग्छ निन्द्रा ?
महिला र पुरुषबीच यौनसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । यौनसम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, असन्तोषी जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्छन् । तर, के वास्तवमै यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै […]
जानिराखौं, सेक्सकाे समयमा के-के हुन्छ ?
सेक्सको लागी महिला र पुरुष दुई जातको आवश्यक्ता पर्दछ । मानब होस वा पशु सबैलाई सेक्सको जरुरत पर्दछ । १२/१३ बर्ष पुगेपछि मानिसलाई सेक्सको अवश्यक्ता पर्दै जाने बैत्रानिकहरुले बताउने गरेका भएपनि पुरुष २५ बर्ष र महिला २५ बर्ष भएपछि बिबाह गर्ने र त्यसपछि गर्ने सेक्सलाई नेपालमा सरकारले बैध ठान्दछ । यानिकी लुकिछिपी त्यसभन्दा अगाडी पनि […]
जानिराखौं, कस्ता आसनले पति पत्निवीच यौन सम्वन्धमा आनन्द दिन्छ ?
श्रीमान-श्रीमतीबीच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ? पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो हुँदा आफूलाई दुई गुणा रमाइलो भएको अनुभूति श्रीमती अर्थात प्रेमीकाको हुन्छ । तर, महिलाको यौन चाहना भने पुरा हुदैँन् । महिलालाई रमाइलो हुने यौन आशनको बारेमा कुरा गर्दैछौं । विभिन्नअनुसन्धानहरूबाट महिलाले असाध्यै मनपराउने यौन आसनहरु निम्न छन् । कुकुर आशन […]
एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुने र विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्ने गर्दछ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेक्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो । सेक्स कतिपटक गर्ने ? सेक्स कतिपटक […]
अत्यधिक व्यस्तताले ल्याएको अस्तव्यस्तताले दिने मानसिक तनाव र नकारात्मकताका कारण देखा पर्ने विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक कमजोरीहरूको असर मानिसहरूको यौन क्षमतामा देखा परिराखेको छ । एकातिर तनावपूर्ण जीवनशैलीका कारण पुरुषहरूमा समस्या देखा परिराखेको छ भने अर्कोतिर महिलाहरूमा पनि कामेक्षाको कमी र कामेक्षा भएका बेला पनि पुरुष साथीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर कुण्ठाग्रस्त हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ […]
सेक्सका बारेमा महिला पुरुष दुबै धेरैभन्दा धेरै कुराहरु जान्न चाहान्छन् । तर उनीहरु कुरा गर्न लजाउँछन् । सुखद दापत्य जीवनको कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ भने र परिवारमा आपसी सझदारी बढाउन चाहानुहुन्छ भने यस्ता कुराहरु श्रीमान र श्रीमतीबिच हुनुपर्छ । बेडमा भएको बेला मानिसहरु सेक्स गर्न आतुर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुरुषले महिला र महिलाले एक अर्कालाई […]